Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Maanta & Midnimada Soomaali-Galbeed Waa Mid Muqadas Ah.
Maqaal: Maanta & Midnimada Soomaali-Galbeed Waa Mid Muqadas Ah.
Posted by ONA Admin	/ September 10, 2018
Afartii bilood ee lasoo dhaafay waxay ahayd kuwo taariikhi ah oo dhacdooyin badan ay ka dheceen Itoobiya. Isbadalka ku yimid taliska Itoobiya haba ugu horeeyo isbedellada sida xawliga ah ku socda ee saameeyay dhamaan shucuubta iyo qawmiyadaha kala duwan ee ku hoos dulman taliska Itoobiya.
Qoomiyadaha Itoobiya waxay wadaan abaabul iyo midnimo dhexdooda ah (Qoomiyad waliba gaarkeed), waxay u diyaar garoobayaan mustaqbal ay suurtagal tahay inay wax-waliba dhacaan. Waxaa kale oo wacyi-galin iyo abaabul xoogan uu ka socdaan dhamaan deegaanada kala duwan ee Itoobiya oo idil.
Innaga Soomaali ahaan, waxaan haysanaa fursad dahabi ah oo aan dhiggeenna kale ee Itoobiyaanka ah kula tartami karno hadaan doonayno inaan qawmiyadaha kale wax la qaybsano. Waa haddii aan caqligeeda iyo cududeenna midayno. Maanta iyo goor-walba baahideenna 1aad, 2aad iyo 3aad waa Midnimo, taas waa inaan xooggeenna oo idil isugu gaynnaa.
Khalad-wayn oo masiiri ah wuxuu dhici-doonaa haddii ay Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO/ONLF) iyo Maamulka maanta ka arimiya Jigjiga ee uu madaxa ka yahay Musdhafe Muxumad Cumar dhexdooda ka adeegto dowladda dhexe ee Itoobiya, iyaguna fursaddaas u sahlaan xukuumadda Addis ababa inay Soomaalida ku kala qaybiso.
Dabcan, ONLF waa Urur gobanimadoon ah, sidaa daraadeed waa lagama-maarmaan inuu arrimaha waawayn ee masiiriga ah ee khilaafka iyo hardanka abuuray kala hadlo xukuumadda dhexe ee Itoobiya (Waaba hadday Itoobiya diyaar utahay e) laakiin arrintaasi ma’aha inay dabar ku noqoto dadaalka loo baahan-yahay in la galiyo midnimada dhexdeenna ah ka Soomaali ahaan.
Runtii, maanta waxaan haysanaa shacab midaysan oo is-jecel oo xorriyad iyo caddaalad-doon ah, kaliya waxay u baahantahay midnimo siyaasadeed oo u adeegaysa maslaxadda shacabka Soomaaliyeed ee Gumaysigu soo ragaadiyay sanadaha badan.
Ismaaciil Cali Ismaaciil